PSJTV | साम्राज्ञी इन्स्टामा हिट, पर्दामा फ्लप!
अर्काको शरीरको के कुरा गरेको भन्ने होलान्। तर, सेलिब्रेटीको बान्कीको चर्चा हुने नै भयो। अझ जसले चर्चाका लागि अभिनयमा भन्दा देह दर्शनलाई नै बढी उपयोग गर्छन्, उनीहरुको अभिनयको मात्र चर्चा कसरी होस्।
नपत्याए साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहलाई नै हेरौँ न। मध्य जिउडालकी उनी कतै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पर्दामा देखिने नायिका साम्राज्ञी उनै हुन् भनेर चिन्नै मुस्किल मुस्किल हुन्छ।
अनुहार त ठिकठिकै हो, अभिनय ध्यवस्त। तैपनि चर्चामा भने आइरहन्छिन् उनी। बालीमा उनले गरेको बबाल हेरौँ त। फिल्मी दृश्यभन्दा पनि बोल्ड छन् उनको चर्तिकला। समुद्री किनारामा देवांश जंग राणासँग समुद्री किनारामा पूरै राशलीलामा मग्न। कहिले कता समातेको, कहिले कता समातेको!
यो खबर आजको शुक्रबार साप्ताहिकले छापेको छ।